Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.3.3 Dib u dhac la'aan
Cabbiraadda ilaha xogta weyni waxay u badantahay in ay bedesho dabeecadda.
Mid ka mid ah caqabadaha cilmi baarista bulshada ayaa ah in dadku ay bedeli karaan dabeecadahooda marka ay ogaadaan in ay la socdaan cilmi-baarayaasha. Cilmi-baareyaasha bulshada guud ahaan waxay ugu yeeraan fal-celinta (Webb et al. 1966) . Tusaale ahaan, dadku waxay noqon karaan kuwa ugu deeqay barashada shaybaarka marka loo eego daraasaadka maadada, sababtoo ah hore waxay ogyihiin in la arkay (Levitt and List 2007a) . Hal dhinac oo xog ah oo ballaaran oo cilmi-baarayaal badani ka helayaan rajo-gelis ayaa ah in ka-qaybgalayaashu aysan guud ahaan ka warqabin in xogtooda la qabsaday ama ay noqdeen kuwo caadeystey ururinta xogtan si aysan u badalin dhaqankooda. Sababtoo ah ka qaybgalayaashu waa mid aan firfircoonayn , sidaas darteed, ilo badan oo xogta weyn ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu baro akhlaaqda aan la aqbali karin si sax ah horeyba. Tusaale ahaan, Stephens-Davidowitz (2014) isticmaalay ereyada cunsuriyadeed ee raadinta mashiinka raadinta si loo cabbiro deegaanada kala duwan ee Mareykanka. Qeybta xogta raadinta (fiiri qaybta 2.3.1) dabeecadda xogta raadinta waxay u suurogelisay cabirada ay adkaan doonto isticmaalka habab kale, sida sahan.
Si kastaba ha ahaatee, waxqabadka aan sugneyn, si kastaba ha ahaatee, ma hubiyo in xogahaani ay si toos ah u muujinayaan dabeecadaha dadka ama dabeecadaha. Tusaale ahaan, mid ka mid ah jawaab-celiyihii daraasadda ku-salaysan waraysiga ayaa yiri, "Maaha in aanan wax dhibaato ah haysan, aniga uun kuma dhicin Facebook" (Newman et al. 2011) . Si kale haddii loo dhigo, inkasta oo qaar ka mid ah ilaha xogta waaweyni ay yihiin kuwo aan firfircoonayn, had iyo jeer ma ahan kuwo xor ah oo ku xiran rabitaanka bulshada, oo u eg inay dadku rabaan inay soo bandhigaan sida ugu fiican. Dheeraad ah, sida aan ku sharxi doono cutubka dambe, habdhaqanka la qabtay ee ilaha xogta weyn waxaa mararka qaar saameyn ku yeeshay ujeedooyinka milkiilayaasha tartanka, arrin aan ku magacaabo algorithmic confounding . Ugu dambeyntii, inkasta oo wax-qabad la'aantu ay faa'iido u leedahay cilmi-baarista, dabagalka dabeecadaha dadka iyada oo aan la oggalaansho iyo wacyigelin ay kor u qaadayaan walaaca anshaxa ah ee aan ku sharaxi doono si faahfaahsan cutubka 6aad.
Saddexda guryaha ee aan hadda ku sharraxay-weyn, marwalba, iyo aan fir-fircooneyn-guud ahaan, laakiin had iyo jeer, waxtar uma leh cilmi-baarista bulshada. Marka xigta, waxaan u jeedaa toddobada qaybood ee ilaha xogta weyn ee aan dhammeystirnayn, aan la heli karin, aan wakiil ahayn, qulqulaya, algorithmically confounded, wasakhaysan, iyo xasaasiyad-guud ahaan, laakiin had iyo jeer, abuuro dhibaatooyin cilmi-baaris.